Onye kwuru na okpueze dijitalụ Apple Watch bụ azụ azụ? | Esi m mac
Onye kwuru na okpueze dijitalụ Apple Watch bụ azụ azụ?
Ebe m kwuru m na-ekwu ugbu a, m na-ekwu Diego ... M na-amalite isiokwu a na nkebi ahịrịokwu a n'ihi na ụwa nke elekere dijitalụ, n'oge Apple gosipụtara Apple Watch ya na ọha mmadụ, na-ahụ na o nwere ụdị okpu eze onye obula tinyere aka ya n’isi si kedu ka ulo oru apple si diri obi itinye udi ihe a na igwe onyonyo.
Ka ọnwa gafere, a hụrụ na ọ bụ ezie na ọ bụ mmewere nke dị adị na nche kemgbe ọ malitere, ọ ka bụ mmewere nke mere ka ịgagharị interface nke smartwatch dị mfe.
Samsung abụwo isi asọmpi Apple na Samsung Gear ọ chọkwara iduzi ahịa smartwatch. Otú ọ dị, ihe adịghị mma na ọ bụ sistemụ arụmọrụ, nke na mbụ bụ Android Wear na Tizen, nke na-adịghị mmiri mmiri ma dị mfe dị ka atụ anya ya. Ọ bụ ya mere Samsung ji kpebie itinye gam akporo Wear n'akụkụ na weta usoro nke Tizen gị na smartwatches ndị a.
Mgbe Apple tinyere Apple Watch na ahịa, Samsung nwere ike ịmaliteghachi echiche dị mfe dị ka wiil na elekere, mana nke mere na ọ metụtara echiche Apple na okpueze dijitalụ ya, ihe ha emejuputara bu uzo na agbanwe agbanwe na Gear s2 na Gear s3.
Otú ọ dị, taa anyị na-ekwughachi na nnukwu Google, na mmekorita ya na LG a ma ama, ga-etinye ahịa a smartwatch echere na nke mbụ, na-enweghị Apple, ga-enwe okpueze dijitalụ nke yiri nke ahụ nke Apple Watch. Elekere ohuru a inwere ike ihu na onyonyo nke soro isiokwu a ga-esite n'aka usoro ozo nke sistemu Google maka elekere dijitalụ. 2.0 Weebụ Weebụ. Ke adianade do, ọ ga-enwe a ihuenyo mmetụ nke ga-abịa na a handwriting ude usoro yiri idekasi nke Apple Watch. Anyị ga-ahụ ma ọ bụrụ na February 9, nke bụ mgbe ọ kwesịrị a ga-eweta ọhụụ ọhụrụ Google na LG, na-ekpuchi echiche nke Apple Watch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Onye kwuru na okpueze dijitalụ Apple Watch bụ azụ azụ?
nchịkọta akụkọ ahụ nwere echiche karịa gị ... Akwadoro m ka ị gụọ ibe a ... ma eleghị anya, m ga-asụgharị ya maka gị na ihe niile haha ​​salu2: http://www.samsung.com/es/consumer/mobile-devices/wearables/gear/SM-R760NDAAPHE
Benito na nkwanye ugwu niile echere m na ị mejọrọ, ọ bụghị otu melchor ahụ mere ka mụọ mmiri melchor mere
Zaghachi Carlo Napolitano
Malwarebytes chọtara malware ndị ọzọ na macOS, oge a abụghị obi ọjọọ
Bob Burrough: "Tim Cook agbanweela Apple ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na-agwụ ike"